Global Voices teny Malagasy » Torolalana fampahafantarana ny fampitam-baovaon’olon-tsotra manerantany · Global Voices teny Malagasy » Print
Torolalana fampahafantarana ny fampitam-baovaon'olon-tsotra manerantany
Voadika ny 02 Aogositra 2018 3:54 GMT 1	 · Mpanoratra David Sasaki Nandika Miranah
Faly ny Rising Voices manambara ny voalohany amin'ireo andiana torolalana fanentanana natao hanazavana ny fototry ny fampitam-baovaon'olon-tsotra  amin'ny mpamaky tsy ara-teknika.
Ny torolàlana voalohany, Fampahafantarana ny fampitam-baovaon'olon-tsotra dia manolotra fifandraisana sy fanadihadiana mampiseho ny fitomboan'ny fampiasana bilaogy, fandraketam-peo, lahatsary an-tserasera sy sary nomerika eo amin'ireo olom-pirenena isan'andro manerantany mba hampiroboroboana resaka tsy misy mpanelanelana izay miampita sisintany, kolontsaina ary fiteny samihafa. Avy amin'ny teny fampidirana:
Misy ny fiovana mitranga amin'ny fomba fifandraisantsika.
Folo taona lasa izay, nahafantatra momba ny tontolo manodidina antsika tamin'ny gazety, fahitalavitra sy ny radio isika. Mpanao gazety matihanina no mandeha any an-tany lavitra ary mitondra tantara, sary sy horonantsary momba ireo toe-javatra hitany sy ireo olona mihaona amin'izy ireo.
Indraindray mandritra ny sakafo hariva, miresaka momba ireo tantara ireo amin'ny namantsika sy ny fianakaviantsika isika. Saingy folo taona lasa izay, raha na tsy mba nifandray mivantana tamin'ireo mpanao gazety tenany isika. Mpitarika anaty fiarahamonina no namoaka lahatsoratra maneho ny heviny momba ireo lohahevitra samihafa, isika kosa afaka mizara fotsiny ny hevitsika sy ny eritreritsika amin'ny namana vitsivitsy.
Tao anatin'ny taona vitsy farany dia niova ny zava-drehetra. Noho ireo fitaovana vaovao toy ny bilaogy, azo atao ny mamoaka zavatra anaty aterineto. Avy any Torkia ka hatrany Kenya mankany Bolivia, manomboka mizara ny tantarany sy ny heviny amin'ny tontolo hafa manerantany ireo olona toa anao sy izaho .
Na dia azon'ny olona rehetra ampiasaina maimaim-poana aza io fomba fifandraisana vaovao io, monina any amin'ireo tanàna manodidina manankarena ao an-tanàn-dehibe ny ankamaroan'ny olona mandray anjara amin'izany.
Ny tanjon'ity fitarihana ity dia ny hanehoana fa na iza na iza manana fifandraisana amin'ny aterineto dia afaka mandray anjara amin'ny resadresaka eran-tany. Ny fahatakarantsika an'izao tontolo izao dia tsy mifototra amin'ny gazety sy ny televiziona fotsiny ihany, fa amin'ny tsirairay ihany koa.
Ity fanontana voalohany ny Introduction to Citizen Media ity dia amin'ny teny Anglisy, Espaniôla, ary Bengali. Ho hita amin'ny teny Swahili, Malagasy, ary Aymara ny fanontana manaraka.
Na dia efa misy aza ireo fampahafantarana maromaro mahafinaritra mikasika ny fitsipiky ny fampahalalam-baovaon'olom-pirenena, toa mifantoka amin'ny firongatry ny tetikasa haino aman-jerin'olon-tsotra any Amerika Avaratra sy Eoropa Andrefana izy ireo. Ity taridalana ity kosa dia manantena ny hampiseho amin'ny mpamaky any Amerika Avaratra sy Eorôpa Andrefana fa ny sasany amin'ireo fandrosoana mahavariana indrindra sy mahaliana indrindra mifandraika amin'ny fampahalalam-baovaon'olon-tsotra dia mitranga any amin'ny tontolo tsy tandrefana. Mikendry ny ho antontan-kevitra famantarana ho an'ireo tetikasa haino aman-jerin'ny olom-pirenena eo an-toerana izay maniry hanome sehatra iraisampirenena bebe kokoa amin'ny tetikasan'izy ireo izy rehefa manatona ireo mpitarika vondrom-piarahamonina, mpanao politika sy fikambanana izy ireo.
Mandritra ny taona 2008, hanohy hamoaka sy hizara torolàlana izay mandrakitra ny antsipirihany bebe kokoa amin'ny fampidirana sy famahanana RSS, bilaogy, sary nomerika, fandraketam-peo sy lahatsary antserasera ny Rising Voices.
Trohy ny fampahafantarana ny fampitam-baovaon'olon-tsotra amin'ny teny anglisy 
Descarga Una Introducción a Medios Ciudadanos en Español 
সিটিজেন মিডিয়ার পরিচিতি’ ডাউনলোড করুন 
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/08/02/123702/
 fampahafantarana maromaro mahafinaritra : http://citmedia.org/principles
 Descarga Una Introducción a Medios Ciudadanos en Español: https://rising.globalvoicesonline.org/library/Introduction-to-Citizen-Media-ES.pdf
 সিটিজেন মিডিয়ার পরিচিতি’ ডাউনলোড করুন: https://rising.globalvoicesonline.org/library/Introduction-to-Citizen-Media-BN.pdf